CROSSWORD MGBAGWOJU ANYA SOFTWARE - ỊHỌRỌ USORO IHE OMUME - 2019
Ọrụ ezigbo agụmakwụkwọ maka ezinụlọ dum na-edozi mgbagwoju anya. Ihe ha na-eme bụ ịzụ ihe nchekwa ma melite ọrụ ụbụrụ. Enwere ike ijikọta mgbagwoju anya dị otú ahụ. Mmemme ga - abụ onye inyeaka n'okwu a.
Ugbu a, anyị ga-atụle usoro atọ nke ị ga - ahọrọ nke kachasị mma maka onwe gị.
Onye na-eme mkparịta ụka Crossword
Mmemme mbụ anyị nyochaa na-enyere gị aka ngwa ngwa ịmepụta ihe mgbagwoju anya. Nke a ga-ekwe omume n'ihi algọridim kwekọrọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na okwu ole na ole ga-achịkọta, a họọrọ IQEngine ma ọ bụ CrossArchitect.
Okhegov si ederede okwu ga-enyere gị aka ịmepụta ajụjụ.
Usoro nhazi nhọrọ ga-enyere gị aka ịmepụta ihe mgbagwoju anya. O kwere omume igbanwe font na nha ya, yana dozie nọmba na mkpụrụ ndụ.
Usoro a dị iche na ndị ọzọ na ị nwere ike itinye foto na crossword ma dozie ha n'ụzọ dị mfe.
Nakwa na usoro ihe omume ị nwere ike nyocha ngwa ngwa site na itinye naanị mkpụrụ edemede mbụ nke okwu ahụ.
Usoro a maka ịme crosswords na Russian ga-enyere gị aka ịmepụta egwuregwu pụrụ iche gị.
Download Decalion (Decalion)
CrossMaster bụ otu n'ime mmemme ndị ahụ e mere iji wuo okwu mkparị dị elu.
Minus CrossMaster - iji ọrụ niile nke usoro ihe omume ị chọrọ ịzụta ụdị ya zuru oke. Ma site n'enyemaka nke nsụgharị ngosi ahụ, i nwere ike itinye okwu gị n'ọhịa ma chọpụta nyochaa ha. Nke a na-enyere akwụkwọ ọkọwa okwu a wuru.
Enwere ohere ọzọ bụ ịmepụta ụdị crosswords dị iche iche. Usoro ihe omume maka ịmepụta mgbagwoju anya na Russian ga-abụ ezigbo onye nnyemaaka n'iwepụta ihe mgbagwoju anya gị.
CrossMaster, n'adịghị ka mmemme ndị ọzọ ewetara, nwere ọrụ ọzọ - ihe okike dị iche iche nke crosswords. Ma iji ụdị zuru ezu nke ọrụ a ịkwesiri ịzụta ya. Decalion (Decalion) pụrụ iche na ị nwere ike itinye foto na crossword ma tinye ha n'ebe kwesịrị ekwesị.